२० प्रार्थना का प्रकार | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना २० प्रार्थना का प्रकार
२० प्रार्थना का प्रकार
प्रार्थना जीवन र अमर बीचको संचारको माध्यम हो। यो व्यवस्थित च्यानलहरू हो जसले मानिस र परमेश्वर बीचको सञ्चार प्रवाहलाई बढाउँदछ। यसैले प्रासंगिक छ कि हामी बुझ्दछौं र प्रार्थना को प्रकारहरु को ज्ञान मा।
हामीले गर्ने प्रार्थनाको समय मौसम, समय वा परिस्थिति अनुसार फरक हुन्छ जुन हामी आफैंलाई पाउँछौं। एक व्यक्तिले छुटकाराको प्रार्थना गर्दैन जब ऊ वा उनीले धन्यवादको प्रार्थना भनिरहेको छ। मलाई अधिक भन्नु आवश्यक छ, जब कुनै चीजको उद्देश्य अज्ञात हुन्छ, दुरुपयोग अपरिहार्य हुन्छ। हाम्रो प्रार्थनाको व्यवसायलाई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न, महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले हाम्रो निर्मातालाई भन्नु पर्ने प्रार्थनाहरूको सही प्रकारको बारेमा हामीले जान्नु पर्ने मौसम वा परिस्थिति बुझ्नु आवश्यक छ।
१ तिमोथी २: १ मा लेखिएको शास्त्रपद यसैले म यो आग्रह गर्दछु कि सब भन्दा पहिले बिन्तीहरू, प्रार्थनाहरू, बिन्तीहरू, र धन्यवाद दिन, सबै मानिसहरुको लागी गर। यी सबै शब्दहरू बाइबल पदमा एक व्यक्तिले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न सक्ने प्रार्थनाको बारेमा बताउँदछन्।
यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामी २० प्रकारका प्रार्थनाहरूको सूची संकलन गर्न सक्छौं जुन एक व्यक्तिले धर्मशास्त्रमा सान्दर्भिक उदाहरणहरूसँग परमेश्वरलाई भन्न सक्दछ।
१. प्रभुको प्रार्थना
ख्रीष्ट आउनुभन्दा अघि, लेवी पुजारीको समयमा। मानिसहरूले आफैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न सक्दैनथे। जनताको तर्फबाट यो गर्नु पूजाहारीहरूको एकमात्र कर्तव्य हो।
यद्यपि, ख्रीष्टको आगमनले अनुग्रह ल्याउँदछ जुन मानिसहरूले पहिले कहिल्यै उपभोग गर्दैनन्। लूका ११: १--11 को पुस्तकमा ख्रीष्टले मानिसहरूलाई उनीहरूको स्वर्गमा हुनुहुने पितालाई कसरी प्रार्थना गर्ने भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो पहिले त्यो समय भनेर सम्झिन्छ। मानिसहरूलाई परमेश्वरलाई कसरी प्रार्थना गर्ने भनेर केही पनि थिएन।
यो प्रभुको प्रार्थना हामीले प्रार्थना गर्न सक्ने सबै थोक समेट्छ। यदि र केवल यदि हामी यसलाई समझदारीसाथ प्रार्थना गर्छौं।
२. अन्तर्क्रिया प्रार्थना
अन्तर्क्रिया प्रार्थना यो एक हो जुन कसैलाई वा शहरको लागि गरिन्छ। एक व्यक्ति जसले यस प्रकारको प्रार्थना भन्दछ उसलाई एक मध्यस्थकर्ता भनेर चिनिन्छ। वास्तवमा, प्रत्येक प्रार्थना इकाईको मध्यवर्ती हातमा सदस्यहरूको संख्या बढी हुनुपर्दछ। पुरानो नियममा प्रधान पुजारीले मध्यस्थको रूपमा काम गर्दछ। उसले मानिसहरूको तर्फबाट परमेश्वरलाई बलिहरू चढाउँदछ।
परमेश्वरले सदोम र गमोराका मानिसहरूका लागि बिन्ती गर्नुभयो, जब परमेश्वरले उनीहरूको नराम्रो कार्यहरूका कारण सम्पूर्ण शहरलाई नाश गर्न लाग्नुभएको थियो। यद्यपि, अब्राहमले दयाको निम्ति परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे।
येशू ख्रीष्ट मानिसका तर्फबाट पनि कुराकानी गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा ठूलो अन्तर्बिन्तीकर्ता येशू हुनुहुन्छ। उनले सम्पूर्ण मानव जातिको लागि बिन्ती गरे। बाइबलले भन्छ हामी पापी छँदै, ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। उनले हाम्रो रगतले पूंजीगत मूल्य तिरे जुन हामी बचाउन सक्छौं।
हामी विश्वासीहरूको रूपमा हाम्रो देश, परिवार, साथीहरू, र हाम्रो वरपरका सबैका लागि मध्यस्थ बन्न सक्दछौं।
Daily. दैनिक प्रार्थना
यो प्रार्थना को प्रकार हो जुन हामी बाहिर जान अघि प्रत्येक दिन प्रस्ताव गर्दछौं। धेरै चोटि हामी प्रार्थना गर्छौं हामीले सामना गरिरहेका परिस्थितिहरूको आधारमा। सफलता वा बिरामीबाट निको हुन चाहने मानिस प्रायः निको पार्ने प्रार्थनालाई दैनिक प्रार्थनामा बदल्छ।
अर्कोतिर, बाइबलले १ थेसलोनिकी :1:१:5 मा मसीहीहरूको हैसियतमा हामीले प्रार्थना नगरीकन निर्देशन दियो बन्द नगरी प्रार्थना गर्नुहोस्। प्राय: धेरैजसो इसाईहरूले प्रभुको प्रार्थनालाई उनीहरूको दैनिक प्रार्थनामा परिणत गर्दछन् किनकि तिनीहरू प्रार्थना गर्नमा अल्छी भएका छन्। प्रभुको प्रार्थना छोटो र सरल छ भनेर जानेपछि। तथापि, परमेश्वर सधैं हाम्रो दिन उहाँकै हातमा सुम्पन चाहनुहुन्छ। धर्मशास्त्रले हामीलाई यो बुझ्न लगायो कि हामीले प्रत्येक दिन रिडिम गर्नु पर्छ किनकि हरेक दिन खराबले भरिएको छ। यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीसँग एक छ दैनिक प्रार्थना सत्र, जहाँ हामी हाम्रो दिनलाई प्रभुको हातमा सुम्पन्छौं।
Ive. छुटकारा प्रार्थना
छुटकारालाई अर्को चीजको शक्तिशाली चीजबाट बाहिर निकाल्ने कार्यको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। यो एक शक्तिशाली मानिस को बन्धनबाट स्वतन्त्र सेटिंग को अवस्था हो। इस्त्रेलका मान्छेहरू छुटकारा दिलाउने व्यक्तिको राम्रो उदाहरण थिए। धेरै वर्षसम्म तिनीहरू फिरऊन र मिश्रका मानिसहरूलाई कैदमा थिए। जबसम्म परमेश्वरले उद्धारकर्ता (मोशा) लाई पठाउनुभएन छुटकाराको प्रार्थनाको अर्थ युद्धको प्रार्थना हुन सक्छ। जब कुनै व्यक्तिमा दुष्ट आत्मा हुन्छ, उसलाई छुटकाराको लागि प्रार्थना गर्न सकिन्छ।
यसै बीचमा, विश्वासीहरूको हैसियतमा हामीले थाहा पाउनुपर्दछ कि हाम्रो पहिलो छुटकारा ख्रीष्टलाई हाम्रो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार्नु हो। हाम्रो मुखले येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुराको स्वीकारले हामीलाई कुनै पनि किसिमको राक्षसी दासत्वबाट छुटाउँछ। फिलिप्पी २:। को पुस्तक यसैले, परमेश्वर पनि उसलाई उच्च बनाउनु भएको छ र उसलाई एउटा नाम दिएको छ जुन हरेक नाम माथि छ। फिलिप्पी २:१० ताकि येशूको नाममा हरेक घुँडा टेक्नुपर्नेछ, स्वर्गमा, पृथ्वीमा र पृथ्वी मुनि। फिलिप्पी २:११ र हरेक जिब्रोले यो स्वीकार गर्नुपर्दछ कि येशू पिता प्रभु हुनुहुन्छ, पिता पिताको महिमाको निम्ति। येशूको नामले हामीलाई बाँधेर राखेका सबै चीजहरूबाट छुटकारा दिन सक्छ।
W. वारफेयर प्रार्थना
युद्धको प्रार्थना यो प्रार्थनाको रमाईलो प्रकार होइन। यदि यसलाई रोक्न सकिन्छ भने, म पक्का छु कि कोही पनि आफैंले यसमा खोजी गर्न चाहँदैनन्। युद्ध प्रार्थना तपाईं र अन्धकारको होस्ट बीच एक आध्यात्मिक युद्ध हो। यो युद्ध वास्तविक छ। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, ख्रीष्टले पहिले नै जित्नुभयो।
त्यस्तो प्रार्थनाको उत्तम उदाहरण पत्रुसलाई झ्यालखानामा हालिंदा मण्डलीले उनको लागि उत्कट प्रार्थना गरे। मण्डलीलाई थाहा थियो कि पत्रुस पक्राउ पर्‍दा सुसमाचारको सब भन्दा ठूलो शत्रु शैतानले काम गरिरहेको थियो। त्यसोभए, उनीहरूले पत्रुसलाई जेलमा हाल्ने शक्तिविरूद्ध लडाई गरे।
जब हामी त्यस्तो परिस्थितिमा हुन्छौं जुन धेरै गाह्रो हुन्छ। हामीले येशूको शक्ति र रगतमा भएको प्रभावकारितालाई हामीले बुझ्नुपर्दछ। घोषणा गर्नुहोस् कि शैतानले तपाईं र तपाईंको घरानामा येशूको शक्तिमा आफ्नो शक्ति हराउँछ।
Healing. उपचारका लागि प्रार्थना
स्वास्थ्य धन हो। जब एक इसाईको स्वास्थ्यमा शैतानले ठूलो प्रहार गर्दछ। यो रोग, रोग वा प्लेग को पीडा को माध्यम बाट आउन सक्छ। यो उपचारको प्रार्थना भन्नु सही समय हो। भविष्यवक्ता यशैयाले हाम्रा दुर्बलताहरू बोक्ने र हाम्रा सबै रोगहरू निको पार्ने एक व्यक्तिको बारेमा कुरा गरे। यशैया: 53: Surely अवश्य पनि उसले हाम्रो पीडा भोगेको छ, र हामीले हाम्रा कष्टहरू पनि भोगेका छौं। यशैया। 4:। तर हाम्रो पाप लागि घाइते भएको थियो, उहाँले हाम्रो iniquities लागि bruised थियो: हाम्रो शान्ति को chastisement उहाँमाथि थियो; र आफ्नो धर्काहरू हामी निको छन्।
जब हामी बिरामीले हमला गर्छौं यो हाम्रो गान हुनुपर्दछ।
7. भूतहरू बाहिर निकाल्न प्रार्थना
यो प्रार्थना अधिक छुटकारा प्रार्थना जस्तै देखिन्छ। तर यो प्राय: शैतानले मानिसबाट बाहिर निकाल्नको लागि गरिन्छ। म्याथ्यू vs र २ 8-28 मा लेखिएको छ कि कसरी येशूले गेर्जिन्सको देशमा दुईजना मानिसबाट भूतलाई पठाउनुभयो। साँच्चै, एक मानिस शैतान आफैंले लिन सक्छ। त्यस्ता व्यक्ति धेरै शक्तिशाली र हिंसात्मक हुन सक्छन्। तर येशूको नाम भूतहरू भगाउन एक शक्तिशाली उपकरण हो।
प्रेरित9को पुस्तकमा स्किवाका छोराहरूले पावललाई गरेजस्तै भूतहरू भगाउन खोजे। तर स्काभाका छोराहरूले येशूलाई चिन्दैनन्, यसकारण तिनीहरू दुष्टात्माले नराम्रो रूपमा घाइते भए। हामीले उहाँको नाममा भूतहरू भगाउन अघि हामीले येशूलाई मानिस चिनेको र उहाँलाई विश्वास गर्ने दृढ विश्वास गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
Ree. आदेश घोषणा र घोषणा
बाइबलले भन्छ कि आफ्ना परमेश्वरलाई चिन्नेहरू शक्तिशाली हुनेछन्, र तिनीहरूले शोषण गर्नेछन्, दानियल ११::11२। यी अधिकार र आदेशको प्रार्थना हो। यस प्रार्थना गरेका प्रासंगिक व्यक्तिहरूमध्ये केही भविष्यवक्ता एलिया र जोशुआ थिए। एलियाले बालका भविष्यवक्ताहरूको सामुन्ने हुँदा स्वर्गबाट ​​आगो आउनु पर्छ र बालका भविष्यवक्ताहरूलाई जलाउनु पर्छ भनेर १ राजा १:१२ बताउँछन्। र एलिया आहाबको छेउमा उभिए र घोषणा गरे कि त्यहाँ पानी पर्ने छैन। र स्वर्ग तीन बर्ष र छ महिना को लागि बन्द थियो।
फरमान र घोषणाको प्रार्थनाले परमेश्वरको सन्तानको रूपमा हाम्रो वैधता प्रमाणित गरिरहेछ। एक विद्यार्थीले यस्तो घोषणा गरे कि म असफल हुने छैन, प्राध्यापकले सबैलाई विफल पार्ने निर्णय गरे पनि म सफल हुनेछु।
तर, एक व्यक्ति त्यो गर्न सक्षम नहुन सक्छ जब तपाईं भगवानलाई पनि जान्नुहुन्न कि तपाईंले सेवा गर्नुहुने सेवा।
Agreement। सम्झौताको प्रार्थना
सेन्ट म्याथ्यू १ 18: १। म फेरि भन्दछु, यदि तिमीहरू मध्ये दुई जनाले पृथ्वीमा उनीहरूले मागएको कुनै कुराको लागि सहमत गरेको खण्डमा यो मेरा स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताका निम्ति गरिनेछ।
तपाईं प्रार्थना भन्न चाहानुहुन्छ, तर तपाईंको विश्वास अझै माथि बढाएको छैन। प्रार्थना गर्न दृढ विश्वास भएका मानिसहरूलाई हात समात्नु त्यहाँ कुनै हानि छैन।
परमेश्वर उद्देश्यको एकतालाई सम्मान गर्नुहुन्छ, यही कारणले धर्मशास्त्र भन्छ कि एक हजारलाई उडानमा र दुईजनाले दश हजारलाई उडानमा राख्नेछन्। एकतामा शक्ति छ।
१० मिडनाइट प्रार्थना
भजनसंग्रह 63: 1 हे परमेश्वर, तपाईं मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। चाँडै नै म तपाईंलाई खोज्नेछु, मेरो प्राण तिर्खाउनेछ, मेरो शरीर तिमीहरूको लागि सुखा र तिर्खाएको भूमिमा बस्नेछ, जहाँ पानी हुँदैन।
राजा दाऊदले दिनको बिहानमा परमेश्वरलाई पुकार्नुको पछिल्लो जटिलता बुझे।
एक जना मसीहीको जीवनमा मध्यरातमा प्रार्थना गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कामहरू गर्ने उत्तम समय मध्यरातमा हो, जब पृथ्वी टाढा छ। दिनमा प्रकट हुने धेरै दुष्ट चीजहरू मध्यरातमा समाप्त भयो।
बाइबल भन्छ जब एक जना मानिस सुत्दा उसको शत्रु आयो, गहुँको बीच-बीचमा सामा छरेर गयो, मत्ती १ 13:२:25।
११. बिहानको प्रार्थना
यो सामान्यतया प्रार्थनाको प्रकार हो जुन कुनै मानिसले आफ्नो निर्मातालाई भन्छ जब ऊ नयाँ दिनको उज्यालोलाई बिउँझन्छ। यो एक नयाँ दिन हेर्न विशेषाधिकार दिनको लागि भगवानलाई धन्यवाद दिन को रूप मा आउन सक्छ।
१२. पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्दै
तर तिमी प्रियहरू, आफूलाई सबैभन्दा पवित्र विश्वासमा बलियो बनाउँदैछौ र पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरिरहेका छौ "यहूद १:२०।
पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नु हाम्रो इसाई जीवनको एक अनिवार्य अंश हो। प्रत्येक विश्वासीले पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नुपर्छ। यसले प्रार्थनाको स्थानमा हामीलाई निर्माण गर्न र माथि उठाउन मद्दत गर्दछ।
पुरुषहरू जसले प्रार्थनाको ठाउँमा धेरै समय बिताउँदछन् उनीहरूले प्रार्थनाको सट्टा पवित्र आत्माको माध्यमबाट बोल्ने अनुमति पाउने बानीलाई सिकेका छन्। पवित्र आत्मामा बोल्ने वा प्रार्थना गर्ने प्रत्येक विश्वासीको लागि हो कि भनेर तपाईंले सोचिरहनुभएको हुन सक्छ। हो! प्रेरित २:१:2 को पुस्तक Last last days it the the the And And And And the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the last the the the the the the the last the the the the the God the last the the the the the the the the God last last the the the God the the the the the the the the the the God the God the God the the the God the God God God God God God God God God God God God God God God God the God the God God in the in God God God God God God God God God God in God God in God in God in God in God in God in God in God God God God God God God God God days God days God God God God God God God God God God God God। आत्माको वरदान हरेक मानिस र महिलालाई आशिष्‌ हो जसले ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्‍यो।
१.. पापीहरू प्रार्थना
यो प्रार्थना छ जुन टुक्रिएको छ र हृदय कन्टेरिट गर्नेहरूले भनेको छ। जसले परमेश्वर समक्ष आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्दछन्। राजा दाऊद यस प्रार्थनाको लागि एकदम राम्रो उदाहरण थिए। ऊरियाहकी स्वास्नीसित सुतेपछि र उसलाई युद्धको मैदानमा मारे। दाऊदले आफ्नो आत्मामा थकित महसुस गरे, त्यसपछि ऊ परमेश्वरसंग माफी मागे।
भजन 51१ एक पापीको प्रार्थना चढाउनको लागि एक उत्तम शास्त्रपद हो। होमबलिमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्न, परमेश्वरको बलिदानहरू भाँचिएका आत्मा हुन् र हृदय दुषित हुन्छन्। यो एक मानिस जसको हृदय खराब कामद्वारा टुक्रिएको छ कि उसले यो प्रार्थना भन्न प्रतिबद्ध गरेको छ।
१ supp. व्यक्तिगत प्रार्थना प्रार्थना
यो व्यक्तिगत प्रार्थना हो जुन हामी परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनको लागि भन्छौं। व्यक्तिगत बिन्ती प्रार्थना यस्तो प्रकार हो जुन हामीले गम्भीर हृदयले परमेश्वरलाई हाम्रा समस्याहरू बताउँछौं।
अब्शालोमले राजा दाऊदको सिंहासन कब्जा गरेपछि। डेभिड अर्को देश मा शरण लिन थियो। राजा अब्शालोमले एथोफेल नाम गरेको सल्लाहकारको सल्लाह प्रयोग गरे। २ शमूएल १ 2::15१, दाऊदले प्रार्थना गरे, “हे परमप्रभु, अहीतोपेलको सल्लाहलाई मूर्खतामा बदल्नुहोस्। यो व्यक्तिगत प्रार्थना प्रार्थनाको एक उदाहरण हो।
साथै, १ इतिहास :1:१० मा याबेजको जीवन याबेसले इस्राएलका परमेश्वरलाई बोलाए। उनले भने, “यदि तपाईंले मलाई आशिष दिनुहुन्छ, र मेरो टुक्राहरू ठूलो बनाउनु भयो भने, तपाईंको हात मसँग हुन र तपाईंले मलाई दुष्टबाट बचाउँनु हुन्छ। अनि परमेश्वरले उसलाई बिन्ती गर्नुभयो। यी व्यक्तिगत प्रार्थना प्रार्थनाको आदर्श उदाहरणहरू हुन्।
१.. विश्वासको प्रार्थना
हिब्रू 11: 1 अब विश्वास कुराको प्रमाण छैन देखेको लागि, आशा कुराको पदार्थ हो।
विश्वासको प्रार्थनाले सधैं परमेश्वरबाट तुरुन्तै प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दछ।
हामीले विश्वासको रूपमा प्रदर्शन गरेको परमेश्वर चाहानुहुन्छ हामी एक खास चीजको लागि उहाँमाथि पर्खिरहेका छौं। याकूब 5:१:15 लाई जोड दिइन्छ विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउँछ, र प्रभुले उसलाई उठाउनु हुन्छ। यदि उसले पाप गरेको छ भने, उसलाई क्षमा गरिनेछ। यसले विश्वासको प्रार्थनाको शक्तिलाई वर्णन गर्दछ। बाइबल भन्छ कमजोर म कमजोर छु भन्न। विश्वासको प्रार्थना भनेको वचनले भनेको कुरामा जीवन बिताउनु हो, धर्मशास्त्रले भनेको कुरामा।
१ion. भोजको लागि प्रार्थना
पवित्र स Commun्गति प्रस्तुत गर्नु अघि, यो महत्वपूर्ण छ कि परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नु पर्छ। प्रभु-भोज भनेको येशू ख्रीष्ट मार्फत हामीले परमेश्वरसँग एक सम्वन्धित कार्य गर्दछ। पक्राउमा केहि घण्टा पछि, उनले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रभु-भोज दिए जुन उनको रगत र शरीरलाई जनाउँछ।
उही शिरामा उनले आज्ञा गरे कि हामीले यो सँधै उसको सम्झनामा गर्नु पर्छ। यो प्रार्थना प्रस्तुत गर्दा हामीले यो तथ्यलाई स्वीकार्नुपर्दछ कि हामी योग्य छैनौं तर अनुग्रहबाट हामी योग्य हुन्छौं।
17. निर्मल प्रार्थना
धेरै समय, हामी परिस्थितिमा संघर्ष गर्छौं जुन हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौं। किनभने, यदि हामी यस्तो चीज हटाई दियौं भने हाम्रो शान्ति विकृत हुनसक्ने डर छ। निर्मल प्रार्थना भनेको शान्ति र दिमागको शान्ति हो।
हामीले परिवर्तन गर्न नसक्ने चीजहरू स्वीकार गर्न यो ठूलो अनुग्रह हो। अब हामीले परिवर्तन गर्न नसक्ने स्थिति पहिचान गर्न अझ ठूलो अनुग्रह चाहिन्छ। होशियारी वा अचेत हुँदै, हामी सबैलाई निर्मल प्रार्थना भन्छौं। सबैभन्दा हिंस्रक मानिस पनि जब उसले एक देख्छ उसले मनको शान्तिलाई कदर गर्दछ र प्रेम गर्दछ।
१ for. मण्डलीको लागि प्रार्थना
चर्च आध्यात्मिकताको गलियारे हो। धेरै विश्वासीहरू विश्वास गर्दछन् कि चर्च इसाई व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्न एक हुनुपर्दछ, मानिसहरूले इशाराको अभिव्यक्ति बिना। के धेरैले बुझ्दैनन् कि मानिसहरू मण्डली हुन् र चर्च भनेको मानिसहरू हुन्।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, चर्चको लागि प्रार्थना भनेको हाम्रो लागि प्रार्थना हो। बाइबल भन्छ यो ढु rock्गामा म मेरो चर्च बनाउनेछु र नरकको ढोका विजय हुनेछैन। पत्रुस जान्दछन् कि पत्रुस चर्चको खामो हुन् जसले पत्रुस बोक्छन् पत्रुसले शत्रुको प्राणलाई बचाउन नपरोस् भनेर प्रार्थना गर्न समय निकाल्थे। हामी विश्वासीहरू पनि मण्डलीको हेरचाहको कर्तव्य हो। जुन हामी हाम्रो प्रार्थना मार्फत देखाउन सक्छौं।
राष्ट्रका लागि प्रार्थना
बाइबल भन्छ कि हामीले यरूशलेमको भलाइको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, यसलाई प्रेम गर्नेहरू उन्नति हुनेछन्। भजन १२२:। यरूशलेमको शान्तिको लागि प्रार्थना गरः ती खुशीयालीहरूले तपाईंलाई प्रेम गर्छन्। हाम्रो देश हाम्रो आफ्नै यरूशलेम छ। यदि देशमा शान्ति छ भने जनताको उन्नति हुन्छ। पुरुषहरूले शान्तिपूर्वक शासन गर्दा सहजै परमेश्वरको सेवा गर्न सक्नेछन।
देशका लागि प्रार्थना शान्ति, स्थायित्व, आर्थिक बहुलता र सरकारको सहज संक्रमणका लागि हुन सक्छ।
२०. परिवारका लागि प्रार्थना
मसीहीहरूको हैसियतमा हामी आफ्नो परिवारको लागि पहरेदारको रूपमा काम गर्न सक्छौं। चाहे हामी भर्खर विवाह गरेका छौं वा अझै पनि हाम्रा आमाबुवाको हेरचाहमा छ। हामीले आफ्नो परिवारलाई परमेश्वरको हातमा सुम्पनु महत्त्वपूर्ण छ।
जबसम्म मोशाले इस्राएलीहरू सँगै जान अस्वीकार गरे उनीहरूले परमेश्वरको उपस्थितिमा उनीहरूलाई जाने थिएनन्। प्रस्थान :33 15:१:XNUMX र उहाँले तपाईंको उपस्थिति मसँग छैन भने, हामीलाई छैन अप यसैले बोक्न, उहाँलाई भन्नुभयो। यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले आफ्नो परिवारको मामिलामा परमेश्वरको उपस्थिति खोज्नुपर्छ।
परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न सक्ने बिभिन्न किसिमका ज्ञानहरुबाट। त्यसैले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। मानिससँग यो सबै कहिले हुँदैन। त्यहाँ सधैं प्रार्थनाको केहि हुनेछ। यस प्रकारको प्रार्थनाले हामीलाई प्रार्थनामा केन्द्रित गर्न आवश्यक पर्ने क्षेत्र पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्दछ।
अघिल्लो लेखमाडबल प्रचारको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू
अर्को लेखमासपना मा यौन सम्बन्धको विरुद्ध प्रार्थना
आज November नोभेम्बर २०१ For को लागि दैनिक बाइबल पढाइ।
मधुमेह रोगीहरूको लागि चिकित्सा प्रार्थना